घर संयुक्त राज्य फुटबॉल स्टोरीहरू अंग्रेजी फुटबल खेलाडीहरू Emile स्मिथ रोवे बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
हाम्रो Emile स्मिथ-रोविको जीवनीले तपाईंलाई उसको बचपन कहानी, प्रारम्भिक जीवन, अभिभावक, परिवार, प्रेमिका / पत्नी हुनु, जीवनशैली, नेट वर्थ, र व्यक्तिगत जीवनको बारे तथ्यहरू बताउँछ।
संक्षेपमा भन्नुपर्दा, हामीसँग अंग्रेजी फुटबल स्टारलेटबाट प्रेरित भएको इतिहास छ आर्सेनल फुटबल क्लब। हामी उनको बाल्यकालदेखि शुरु गर्दछौं जब उहाँ गनर्ससँग प्रख्यात भए। तपाईको आत्मकथा भूख बढाउन, उसको जीवन प्रगति ग्यालरी हेर्नुहोस् - Emile स्मिथ रोवको बायोको एक सारांश।
Emile स्मिथ रोवको जीवनी। बाल्यकालदेखि फेम।
हो, सबैलाई थाहा छ उनी उस्तै देखिन्छन् केविन डी ब्रुने देखिने र क्षमतामा। यस कारणका लागि, गोलले उसलाई बोलाउँदछ आर्सेनलको क्रोइडन डी ब्रूने - एक केटा जसले टेलिफोन बक्समा पनि ठाउँ भेट्टाउन सक्दछ। प्रशंसकको बावजुद, हामी केवल केही प्रशंसकहरु लाई उनको जीवन कथा थाहा छ सूचना। हामीसँग यो सबै तपाइँको लागि तयार छ, र खेल प्रेम को लागी। अब थप विज्ञापन बिना, सुरु गरौं।
Emile स्मिथ रोवेको बाल्यकाल कहानी:
जीवनी शुरुवातकर्ताहरूको लागि, उहाँ उपनाम लिनुहुन्छ - Emzinho। इमिले स्मिथ रोवेको जन्म जुलाई २००० को २ 28 औं दिनमा उनकी आमा, फियोना रोवे र बुबा लेस्ली रोवे, दक्षिण लन्डन, इ England्ल्यान्डको एउटा ठूलो शहर क्रोएडनमा भएको थियो।
अ professional्ग्रेजी प्रोफेशनल फुटबलर दुई छोरा मध्ये दोस्रो छोरा हो - आमा-बुबाको बीचमा मिलनबाट जन्मेका हुन सक्छन् सम्भवतः उनीहरूको .० को दशकमा। तल काम सहयोगी संग लेस स्मिथ रोवे हो।
Emile स्मिथ रोवेका एक आमा बुबालाई भेट्नुहोस्। के तपाईंले उनी र लेस, उनको बुवा बीचको समानता देख्नुभयो?
लेससँगको वार्तालापमा, हामीले पत्ता लगायौं कि उनले यो फोटो क्रिसमसको वार्षिक कार्यक्रममा लिएका थिए जहाँ एमिली पनि सहभागी थिए। त्यस अवसरमा ती जवानले अटोग्राफमा हस्ताक्षर गरे र तिनका बुबाले काम गर्ने केही विशेष व्यक्तिहरूसँग फोटो पनि खिचे। यो उसको नम्र सुरुवातको संकेत हो।
एक जेठो भाईको साथ बचपनका क्षणहरू बिताउने बारेमा धेरै महान कुराहरू छन्। युवा Emile को लागी, यो उनको जीवन मीठो बनायो। दुबै भाइबहिनीले आफ्नो शुरुआती वर्षहरू दक्षिण लन्डनको प्रख्यात शहर थोरनटन हेथमा बिताए। केटाको रूपमा, ESR मूर्तिकृत फ्रैंक लम्पर्ड.
Emile स्मिथ रोवे परिवार पृष्ठभूमि:
फुटबलरका अभिभावक - कम र फियोना - एक पटक मध्यम-वर्ग कमाई गर्थे। आमा र बुबा दुवैले लन्डनको उत्तरमा सामाजिक देखभालकर्मीहरूको रूपमा खुशी पाए। प्रारम्भमा, कम र फियोनाले उनीहरूको घर बनाउने कुरा सुनिश्चित गर्‍यो जसको जीवनशैली कडा परिश्रम र आदरको वरिपरि केन्द्रित छ। कि तिनीहरूले आफ्ना छोराहरू सम्मिलित गरे।
Emile स्मिथ रोवे परिवार उत्पत्ति:
अंग्रेजी फुटबलरको थोर्न्टन हेथको जन्मस्थान फुटबल प्रशंसकहरूलाई खुशी पार्ने उनको चाहानाको बारेमा धेरै बोल्छ। सत्य के हो भने, Emile लन्डन जरा मान्छे मेहनती छन्। सारांशमा, तिनीहरूलाई थाहा छ जीवनमा सफल हुन के लिन्छ।
Emile स्मिथ रोवे परिवार Thornton स्वास्थ्य, दक्षिणी ग्रेटर लन्डन, इ England्ल्यान्डका मूल निवासी हुन्।
को जीवन हेर्नुहोस् विल्फेड जाहा, उदाहरणका लागि। निस्सन्देह, उहाँ थोरन्टन हेथको जन्म र प्रजननको उत्तम उदाहरण हुनुहुन्छ। सरल शब्दमा भन्ने हो भने, एमिलीको गृहनगरले अल्छी मान्छे उत्पादन गर्छ।
एक सानो केटा, Emzinho आफ्नो भविष्यवाणी गर्न सक्छ। एक पेशेवर फुटबलर बन्ने उनको महत्वाकांक्षाहरु एक पारित कल्पना को रूप मा गएन। जीवितको लागि फुटबल खेल्ने तिनीहरूको केटाको इच्छालाई मान्यता दिँदै, एल्मेका आमाबुवा (फियोना र लेस) ले उनलाई स्थानीय फुटबल स्कूलमा भर्ना गरे।
आफ्नो सीपलाई माथि राख्न, मेहनती एमिले स्कूलको समय पछि पनि फुटबलको साथ जारी राखे। उसले वरपरको फुटबल किकमा पनि ठूलो भाग लियो। Emile स्मिथ रोवेका आमा बुबाले उत्तर लन्डनमा काम गरेको हुनाले उनीहरूलाई आफ्नो छोराको लागि क्यारियरको अवसरहरू भेट्टाउन सजिलो भयो।
उनी आर्सेनलमा भर्ना हुनु भन्दा पहिले, एलिमेको चेल्सीसँग २०० around तिर ट्रायल भएको थियो। अन्तमा र आफ्नो परिवारको आनन्दमा, १० वर्षको उमेरमा ती केटाले गनर्सले स्वीकार गरे।
Emile स्मिथ रोवे अनटाल्ड फुटबल कहानी:
आर्सेनल शैक्षिक घरमा भर्ना भएपछि परिवारका लागि एउटा चुनौती आए। लेस र फियोनाको लागि दैनिक दुई घण्टा यात्रा गर्न (गाह्रो थियो) हेलेको अन्त्यमा Emile लाई छोड्नको लागि - जहाँ हामीसँग आर्सेनल एकेडेमी छ।
जीवन सजिलो बनाउनको लागि, Emile, तिनका भाइ र आमा बुबाले दक्षिणबाट उत्तरी लन्डनमा बसाई सर्ने निर्णय गरे। त्योसँग, सामान्य लामो दूरीको यात्रा मेटाइयो। बसाई सकेपछि, आफ्नो बुबाले आफ्नो घरको बच्चालाई नियालेर राख्न यो सजिलो थियो। यस समयमा, लेस र फियोना आफ्ना छोराले खेलेको प्रायः सबै खेलहरू हेर्न थाले।
आर्सेनल संग प्रारम्भिक क्यारियर जीवन:
एमिली गनर्सको साथ एक द्रुत वृद्धि अनुभव गरे। उहाँ त्यस्तो प्रकारको हुनुहुन्थ्यो जसले आफ्नो मार्गमा राखेका कुनै पनि चुनौतीहरूबाट माथि उक्लनुभयो। उनले एकेडेमीमा जाँदा अझ बढी बल पाए। यी केटाहरूमध्ये - २०१० पछि - हामी हाम्रो छातीमा हराउन सक्छौं भन्न भन्न कि एमेलले सबैभन्दा बढी सफलता देखेको छ
युवा वर्गको बीचमा यात्रा गर्दा, स्मिथ रोवे आफूलाई एक आक्रामक whiz बच्चा मा विकसित भएको देखे। ऊ केटा थियो जसले चिपकने नियन्त्रण र आपत्तिजनक मिडफील्ड दस्तकको साथ आशिष् पायो। विगतका विरोधीहरूलाई बहिर्गन पार्न उसले खुशीका साथ प्रयोग गरेको थियो।
Emile स्मिथ रोवको जीवनी- The Road to Fame कहानी:
उनको पन्ध्र जन्मदिनको नजिक आइपुगेपछि, मुख्य प्रतिभा स्पटर्सहरू बीच वार्तालाप भयो जसले युवाको इ England्ल्यान्डको सम्भावनाबारे छलफल गरे। Emile स्मिथ रोवेको परिवारको लागि आश्चर्यको कुरा, घरको बच्चाले इ England्ल्यान्ड कल प्राप्त गर्यो - अन्डर १ 16 टीमको लागि।
एक बर्ष पछि - जबकि अझै आर्सेनल एकेडेमी मा दर्ता माध्यम बाट प्रगति गर्दै - Emile भाग्य को अर्को कल भयो। यस पटक उनलाई २०१ F फिफा U-१ 2017 विश्वकपको भाग बन्न बोलाइएको छ।
उसको उज्ज्वल सुनौलो कपालको साथ, स्मिथ रोइ पिचमा कहिल्यै मिस गर्न गाह्रो थिएन। उसको अचम्मका गोलहरूको लागि धन्यवाद, हाम्रो केटा Rhian Brewster इ England्ल्यान्डले ट्रफी जित्न सहयोग पुर्‍यायो।
घण्टाको समुहले उसको शिल्पलाई आदर गर्नका साथै आफ्नो राष्ट्रिय सम्मानमा ठूला क्लबहरू हस्ताक्षरको लागि उनका पछि लागिरहेका देखे। फाइदाहरू मध्ये टट्टेनहम र बार्सिलोना थिए। सत्य भन्न सकिन्छ, एमिली क्लबको पछाडि पछाडि पनी पनि आर्सेनलको लागि साँचो उभिइन्। नम्रता र विश्वासले उनले स्पनर र बार्कालाई अस्वीकार गर्दा गनर्ससँग आफ्नो निष्ठाको लागि वाचा गरिरहेको थियो।
Emile स्मिथ रोव बायो - सफलता कहानी:
धेरै युवाहरूले गरेजस्तै उनी पनि १ 18 वर्षको उमेरमा onणमा गए। पहिलो आरबी लाइपजीग र दोस्रो हडर्सफील्ड टाउन। आफ्नो बक्यौता तिरेको पछि, जवान आर्सेनल फर्कियो - को शिक्षण अन्तर्गत फ्रेडी लजj्गबर्ग। त्यस समयमा, Emile ले आफ्नो छाप पार्न शुरू गर्यो जबकि धैर्यपूर्वक आर्सेनल पहिलो टीमको अवसरको लागि प्रतिक्षा गर्दै।
मध्य २०२० / २०२० को मौसममा, आर्सेनलको प्रदर्शन चुरायो। त्यस समयमा, क्लबका बहु-लाख पाउन्ड तारहरू फ्लप भए। चिन्तित माइकल अर्टेटा आशा को एक किरण प्रदान गर्दछ कि केहि खोज मा थियो। उनको रिजर्वमा गहिरो खोजी गर्दै, Emile Rowe-Smith का एक अस्पष्ट नाम पप अप भयो।
गनर्स फ्यानहरूको सराहना ध्यान दिईएको छैन ft फिट अग्लो आक्रमण मिडफिल्डरको साथ साथै नोटबेलहरू (जस्तै किरेर टिर्ने) एक स्ट्यान्डआउट स्टारहरू मध्ये एक बन्न पुग्यो जसले आफ्नो क्लबलाई २०२० को सकारात्मक अन्त्य र २०२१ को एक उज्जवल सुरुवात गरायो।
समयमा (जनवरी २०२१), कहिले Emile स्मिथ रोवे नेल्गिजिंग एन'गोलो कान्ते पछि चेल्सीको बिरूद्ध रमाइलो अप्ठ्यारो पारेको छ, आर्सेनल प्रशंसकहरू अलमल्ल भए - उनीहरूको दिमागमा एउटा कुराको साथ। तिनीहरूलाई अब आवश्यक छैन माइकल अर्टेटा हस्ताक्षर गर्नु Isco को लागि प्रतिस्थापन रूपमा Ozil। हेर्नुहोस्, नयाँ Mesut, AKA Emzinho।
यो बायो लेख्दा, फियोना र लेसको अन्तिम-जन्मेको बच्चा आर्सेनलको सबैभन्दा रमाइलो सम्भाव्यता मध्ये एक हो। संग एक शक्तिशाली साझेदारी जहाज गठन Bukayo Saka (अर्को आर्सेनल वफादार), हामी स्मिथ रोवेलाई कुनै समय बिना आर्सेनल नियमित बन्न सल्लाह दिन्छौं। बाँकी, हामी भन्छौं, इतिहास हो।
Emile स्मिथ रोवे प्रेम जीवन - प्रेमिका, पत्नी, बच्चा?
उनको प्रसिद्धिमा वृद्धि र गनर्ससँग धेरै सफल हुँदै, यो निश्चित छ कि आर्सेनल प्रशंसकहरूले उनको प्रेम जीवनमा निश्चित जिज्ञासा राख्नेछन्। प्रश्नहरू जस्तै Emzinho एक प्रेमिका छ। वा हुनसक्छ ... एक श्रीमती र बच्चा आफ्नो उमेर साथीले जस्तै - फिल फडन - गर्दछ।
ठिक छ, यहाँ हाम्रो विचार छ। Lifebogger फुटबल स्टार मा पहिले नै आफ्नो जीवन मा एक महिला छ मा विश्वास गर्छन् तर सही पल को अनावरण गर्न को लागी प्रतिक्षा गर्दै। उनको मात्र होइन, तर भविष्यमा उनका बच्चाहरू उहाँबाट जन्मे किनकि Emile स्मिथ रोवेले हामीलाई बुबा र राम्रो पतिको रूपमा प्रहार गरे।
Emile स्मिथ रोव को हो फुटबल खेलहरु बाट टाढा? उहाँलाई अझ राम्ररी चिन्न हामी तपाईंलाई छोटो कथा बताउनेछौं।
धेरै वर्ष अघि, एक पत्रकारले युवाको बारेमा सोधे कि उनी कहाँ जन्मेका थिए। अन्तर्वार्ताकारको जीवनलाई सहज गर्न को लागी उसले प्रयास गर्न सक्ने बनाउन, Emile ले उत्तर दियो ... "Croydon।" आर्सेनल केटाले थोर्नटन हेथको उल्लेख गर्नुभएन - उसको जन्मस्थान, जहाँ उनी घर भन्छन्।
अब यसले के स imp्केत गर्छ?… यसको मतलब स्मिथ रोवीले थुप्रै लडाईहरू जितेका छन् जसको बारेमा हामी केही पनि जान्दैनौं - बाहेक जब उसले आफ्नो परिवारको जराको उल्लेख गर्दछ। ऊ त्यस्तो व्यक्ति हो जसले मानसिक कडाई र कार्य नैतिकताको मूल्य जगाउँछ। हामी अनुशासनलाई उपहारको रूपमा देख्छौं जुन युवा गनरलाई जारी राख्छ।
उनका शौकहरूको सम्बन्धमा, हेक्टर बेलरिन जत्तिकै चम्किरहेको तारा एक अनुभवी गेमर हो। अन्तमा, हामी याद गर्छौं कि ऊ एक्लै किनमेल गर्न मन पराउँछ - एक प्रेमिका बिना - कम्तिमा अहिलेको लागि।
Emile स्मिथ रोवे जीवन शैली:
Emzinho के गर्छ उसले २०,००० पाउन्ड हरेक हप्ता प्राप्त गर्छ? सर्वप्रथम पहिलो, उनी राम्रो लुगा र जुत्तामा खर्च गर्छन्। ESR आफ्नो व्यक्तित्व प्रशंसक को बारे मा कम थाहा छ को एक आफ्नो उपस्थिति प्रतिबिम्बित गर्न को लागी प्रेम गर्दछ।
आफ्नो चरित्रको कुरा गर्दा, Emile हास्य एक हास्यपूर्ण भावना छ जुन उनको विनम्र जीवनशैली को प्रतीक हो। Croydon मूल पनी निश्चित रूप मा एक्ट मा nasty बिना मान्छे कसरी चिढाउने थाहा छ।
वर्तमानमा करीव £ 700K (२०२० आंकडा) मा राखिएको, Emile स्मिथ रोवेको कुल सम्पत्ति माथि शट हुन सक्छ किनकि मेगा आर्सेनल सम्झौताको दृश्यमा छ। उसको वित्तीय स्थिति संक्षेप गर्न, उसले ड्राइभ गरेको कार हेर्नुहोस्। यो उसको वर्तमान क्रय शक्ति को बारे मा धेरै भन्छ।
Emile स्मिथ रोवेको कार।
Emile स्मिथ रोवेको पारिवारिक जीवन:
तिनीहरू रूखका हाँगाहरू जस्ता छन्। यो एक परिवार हो जुन बिभिन्न दिशामा हुर्कियो, तर तिनीहरूको जरा एकै रहन छनौट गर्दछ। यस सेक्सनमा, हामी उनको आमा, बुबा, भाइ र आफन्तहरूको बारेमा बढी प्रकाश दिन्छौं।
Emile स्मिथ रोवे अभिभावकको बारेमा:
लेसको आँखामा हेर्नुहोस्। तपाईं के देख्नुहुन्छ? ... हाम्रोलागि, हामी गर्व गर्ने बुबाबाट शुद्ध प्रेम देख्छौं। उनको पेशाबाट प्रेरित (सामाजिक हेरचाहको कार्य), दुबै आमा बुबाले उनीहरूको गृहकार्य गरेका छन्।
सुपर ड्याड, लेस आत्मसंयमको स्रोत हो जबकि उनकी पत्नी फियोना परिवारमा दया र नम्रताको जड हुन्। उत्तर लन्डनमा बस्दै, दुबै आमा बुबा बुबाको शहरको शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्छन्। तिनीहरू अझै पनि आफ्नो छोराले खेलेको प्रत्येक खेलमा भाग लिन समय पाउँछन्।
Emile स्मिथ रोवे भाइको बारेमा:
जहाँसम्म हामीलाई थाहा छ - बाल्यकालदेखि नै, फुटबलर र उसको ठूलो भाई गोंद जस्तै सँगै अडिए। तथापि, वर्ष बित्दै जाँदा, ती दुवैले आफ्नो गन्तव्यको सामना गरे। हामी थोरै जान्दछौं कि एमिलीको ठूलो भाइ फुटबलमा प्रवेश गरे कि थिएनन्। यो केवल समयको कुरा हो जब हाम्रो अनुसन्धान टोलीले उनी र आफन्तहरूको बारेमा पत्ता लगाउँदछ - जस मध्ये एकजना उनीबाट feet फिट उचाईमा जन्मजात आएको हो।
Emile स्मिथ रोवे अनटोल्ड तथ्यहरू:
हाम्रो बाल्यकाल र जीवनी कथा लपेटेर, हामी तपाईंलाई अन्तिम नपठाउनुहोस् सत्यको बारेमा तपाईंलाई थाहा नहुन सक्छ Emzinho।
तथ्य # १ - उसको तलब औसत नागरिकसँग तुलना गर्दै:
टेन्चर / सालार
प्रति वर्ष € 1,134,600 £ 1,041,600
प्रति महिना € 94,500 £ 86,800
प्रति हप्ता € 21,787 £ 20,000
प्रति दिन € 3,112 £ 2,857
प्रति घण्टा € 129 £ 119
प्रति मिनेट € 2.2 £ 2
प्रति सेकेन्ड € 0.04 £ 0.03
तपाईले Emile स्मिथ रोवे हेर्न शुरू गर्नुभयोबायो, यो उसले कमाएको हो।
तपाईंलाई थाहा छ?…। औसत लंडनर जसले एक वर्ष ££k कमाउँछ उसले अझै पनि २ 38 बर्ष र months महिना काम गर्नु जरुरी छ Emile स्मिथ रोवेको वार्षिक तलब (२०२० तथ्या .्क) बनाउन।
तथ्य # १: ऊ एक पटक निदायो - फुटबल खेल हराइरहेको:
यो उनको उमेर २ under दिन भित्र भएको थियो - समय फ्रेडी लजj्गबर्ग उसलाई प्रशिक्षक। त्यो वफादार दिन, प्रशंसकहरूले प्रतीक्षा गरे Mesut Ozil आर्सेनल युवाहरुलाई पराजय बाट बचाउन आउन को लागी।
दुर्भाग्यवस, हाम्रो आफ्नै Emile आफ्नो खुशीको घडी पाए। ऊ ओभरलेप्ट भयो - उसको सर्वश्रेष्ठ स्थानमा, अज्ञात स्थानमा - प्रक्रिया हराइरहेको छ। त्यस कारणले, उसका साथीहरूले उनलाई अस्थायी उपनाम दिए - 'स्लीपिंग ब्रो।'
तथ्य # १: आर्सेनलमा टेनिस खेलाडी बन्नुभयो:
यो त्यस्तै भयो जब उनी अझै गनरको एकेडेमीमा थिए। Emile एक पटक आर्सेनल मूर्ति संग एक विशाल टेनिस कौशल साझा, रोबिन वैन फारसी । रिपोर्टको कारण, स्मिथ रोवे आर्सेनल एकेडेमीमा आफ्नो समयमा उत्कृष्ट टेनिस खेलाडी भएको ख्याति कमाए।
तथ्य # १: केविन डी Bruyne संग सम्बन्ध:
Emile स्मिथ रोवी देखी KDB को फुटबल प्रशंसक सम्झना दिलाउँछ, हैन? समानताबाट, तपाईं सजिलै भाइहरूको रूपमा भ्रमित गर्न सक्नुहुन्छ। फेरि, यो आश्चर्यजनक हुँदैन कि म्यान सिटी स्टार को बारे मा अनौंठो सोधपुछ गर्न थाल्नेछ। जस्तो कि प्रश्नहरू रोबी एक अल्बिनो हो - जस्तो कि मानिसहरूले सोध्छन् केविन डी ब्रुने.
युवाका लागि ठूलो भविष्यवाणी गरेर फुटबल सिमुलेशन भिडियो गेमहरू राम्रो प्रदर्शन गरे। यद्यपि उसको समग्र मूल्या ranking्कनका लागि, Emile कमजोर रेटिंगबाट ग्रस्त छ - तपाईं लिभरपुल भन्दा खराब हुनुहुन्न राइस विलियम्स। हामी निश्चित छौं कि दुबै केटाकेटीहरूले वृद्धि देख्नेछन्।
तथ्य # १: किन उनले सानो मोजा
त्यस समयमा उहाँ लोकप्रिय हुनुभयो, तपाईं सजिलै पिचमा उसलाई देख्न सक्नुहुन्थ्यो किनभने उसको खुट्टाको कारण। यी दिनहरू, हामी Emile लाई भाग अनुसरण गर्न जान्छौं ज्याक ग्रेलाश - किनकि उनीहरू दुबै छोटो शिन गार्डहरू र स्टोकिंगहरू लगाउँछन्। अनुसन्धानबाट आएको नतिजाले यो सुझाव दिन्छ कि यो फुटबलको आफ्नै रीति हो
कुनै श doubt्का बिना, आर्सेनल प्रशंसकहरूको आफ्नै क्लबमा उनका आफ्नै केभिन डी ब्रुयिन हुनसक्छन् उहाँ २०२० को प्रसिद्धिमा प्रभावशाली बृद्धि भएपछि। अझ, Emile स्मिथ रोवको जीवनीले हामीलाई सिकाउँछ कि यदि हामीले अवसरको क्षण प्रयोग गरेनौं भने हामीले करियरको वृद्धि अनुभव गर्न सक्दैनौं। अवलोकन गरिए अनुसार, ईएसआरले २०२० को अन्त्यको समयमा अनुग्रहको एक क्षण समात्यो।
विशेष गरी आफ्नो बच्चाको बाँच्नको लागि फुटबल खेल्ने इच्छालाई बुझेपछि, उनीहरूको बलिदानको लागि आफ्ना बाबुआमाको कदर गर्न LifeBogger लाई सुहाउँछ। हामीलाई थाहा छ एमिले स्मिथ रोवेको बाल्यकालमा, लेस र फियोना थोरन्टन हेथमा उत्तर लन्डनमा बसोबास गर्न आफ्नो परिवारको घर छाडे। तिनीहरूले यो गरे, सबै आर्सेनल एकेडेमीमा आफ्नो केटाको लागि सहज सवारी सुनिश्चितको नाममा।
संयोगवश, युवा गनर, केविन डी Bruyne संग आफ्नो घनिष्ठ समानता बाहेक पनि राम्रो अवसर सिर्जना र गोल गोल को राम्रो छ। दुबै एन्टिkingग मिडफिल्डर वा केन्द्रीय मिडफिल्डरको रूपमा स्थित, हामी निष्कर्षमा भन्न सक्छौं कि उहाँसँग ब्रुनको मिश्रण छ र डेनिस Beckamp.
२०२१ मा, फ्यानहरू यो देखेर खुशी छन् Emile स्मिथ रोवे आर्सेनल यात्राको रूपमा चम्किन्छ तिनीहरूको हराएको छवि रिडिम गर्नुहोस्।
कृपया यदि हामीसँग यो लेखमा राम्रो नदेखिने कुनै कुरा देख्नुभयो भने कृपया हामीसँग संलग्न हुनुहोस्। अन्यथा, आक्रमण मिडफिल्डरको बारेमा तपाईंको विचारहरूमा टिप्पणी सेक्सनमा बताउनुहोस्। Emile स्मिथ Rowe को जीवनी को सारांश को लागी, यो Wiki तालिका प्रयोग गर्नुहोस्।
पुरा नाम: Emile स्मिथ रोवे।
जन्म मिति: 28 जुलाई 2000।
जन्मस्थान: क्रोइडन, लन्डन, इ England्ग्ल्यान्ड।
उमेर २ years बर्ष र months महिना पुरानो।
अभिभावक: फियोना स्मिथ रोवे (आमा) र बुबा, लेस स्मिथ रोवे (फादर)।
Siblings: जेठो दाइ र दिदी
पारिवारिक मूल: Thornton स्वास्थ्य।
मीटरमा उचाई २.। मीटर।
फिटमा उचाई Fe फीट
फुटबल आइडल: फ्रान्क ल्याम्पार्ड।
खेल्ने स्थिति: मिडफिल्डर आक्रमण गर्दै।